शिखर वार्ताका मुख्य पात्र ट्रम्प र किम सिङ्गापुरमा के गर्दैछन् ? | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय शिखर वार्ताका मुख्य पात्र ट्रम्प र किम सिङ्गापुरमा के गर्दैछन् ?
on: २८ जेष्ठ २०७५, सोमबार १३:०९ In: अन्तर्राष्ट्रिय, समाचारTags: No Comments
सिङ्गापुर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन विश्वको सर्वाधिक चासो रहेको एक बहुप्रतिक्षित शिखर वार्ताका लागि आइतबार सिङ्गापुर पुगेका छन् ।
यतिखेर सिङ्गापुरमा विश्वका कैयौँ सञ्चारमाध्यम पुगेका छन् । ती सञ्चारले उनी कहाँ बस्नुभएको भन्नेदेखि लिएर उनले आइतबार सिङ्गापुरका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्नेसम्मको अवस्थालाई आफ्ना क्यामेरामा कैँद गर्न निकै चासो देखाएका बताइएको छ ।
ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पनि क्यानाडामा जारी रहेको औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को बैठकमा सहभागी भएर आइतबार नै सिङ्गापुर पुगेका छन् ।
दुई नेतालाई फरक होटलमा राखिएको छ भने उनहीरुको बसाई वरिपरिको सुरक्षा नगरको अरु क्षेत्रको भन्दा थप र निकै नै कडा पारिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
२८ जेष्ठ २०७५, सोमबार १३:०९